Kutenderera kwemhuru muPorto muto | Kicheni Mapepa
Maria vazquez | | Nyama Recipes, Sauces
El yakakomberedza nyama yemombe Iyo nyama inogona kugadzirirwa zvese zvakabikwa uye kubikwa uye mumuto. Nyama inoyevedza inotibvumidza kugadzirira dhishi rakazara kune huwandu hwakanaka hwevanhu pamberi. Imwe poindi yekuchengeta mundangariro kana tazvipira kumba.
La Porto yemuriwo muto iyo inofambidzana nayo ndeimwe yezvangu zvandinoda zvese kune iyo ruvara iyo yainounza kundiro uye nekunaka kwayo. Karoti ndechimwe chezvinhu zvakakosha zveuyu muto maunogona zvakare kuwedzera tsvuku uye / kana green green hanyanisi. Uye usakanganwa waini yePort kana iwe uchafanirwa kushandura zita reresipi.
Vevha kutenderera inyama inotenda kwazvo inogona kugadzirirwa pamberi nemaasasasas akafanana neino muPorto.
munyori: Maria vazquez
1 yakatenderera nyama yemombe
5 makarotsi, akachekwa zvishoma
1 bhero bhero mhiripiri, akachekwa
1½ girazi rePort waini
1 girazi nyama muto
Iine mesh iripo, mwaka wedenderedzwa.
Tinoisa jeti yakanaka yemafuta muhari uye kana kuchipisa isu tinosunga denderedzwa kusvikira ndarama kunze. Isu tinobvisa muhari uye tinochengetedza.
Muhari imwe chete iyoyo, wedzera mamwe mafuta, kana zvichidikanwa, uye isu takakanda karoti, hanyanisi uye mhiripiri kwemaminitsi mashoma.
Isa denderedzwa uye yakasvuurwa uye yakapwanyika garlic clove muhari.
Isu tinodurura iyo Port waini uye muto wenyama uye kubika pamusoro pekupisa kwakanyanya kwemaminetsi maviri kuitira kuti doro ripararire.
Mushure mekunge tavhara hari, tinodzikisa kupisa kusvika pakati uye bika maminetsi gumi nemashanu anenge, kutenderedza chidimbu kutenderera nepakati panguva yekubika.
Mushure menguva, isu tinotora kunze kutenderera uye tinorega itonhorere pasi.
Zvichakadaro, tinopfuura nepano mukuya miriwo kuti kuzadzisa muto wakanaka.
Kana denderedzwa ratove rakatsamwa, tinobvisa mesh uye tinocheka kuita mafirita.
Isu tinodzorera iwo mafirita kune muto uye kupisa kushandira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: kudzidziswa » Zvidyo » Nyama Recipes » Round mombe naPorto